Apple na-emepe oge ọrụ maka ụlọ ahịa Apple mbụ na India | esi m na mac
Apple na-emepe oge ọrụ maka ụlọ ahịa Apple mbụ na India
Anyị na-ekwu okwu kemgbe ọtụtụ afọ banyere atụmatụ Apple imeghe ụlọ ahịa Apple mbụ ya na India, obodo ebe enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke franchises Apple. Atụmatụ mbụ gafere site na imepe ụlọ ahịa Apple mbụ na 2021, Mana n'ihi ọrịa na-efe efe, echerela atụmatụ igbu oge.
Ha na-egbu oge ruo ugbu a dị ka Apple na-emesi mbọ ike n'iwe ndị ọrụ ya ngwa ngwa maka gịnị ga-abụ ụlọ ahịa Apple abụọ mbụ ga-emepe na obodo ahụ, dịka enwere ike ịgụ na ya LinkedIn biputere Nke Nidhi Sarma, onye isi Apple's Recruitment na India bipụtara na nke ị nwere ike ịgụ:
Taa bụ otu n'ime isi ihe dị mkpa na imepụta akụkọ ihe mere eme Apple Retail na India.
Anyị na-achọ ndị ọrụ maka ụlọ ahịa Apple abụọ mbụ ga-emepe na mba ahụ, kpọmkwem na Mumbai na Delhi.
Ọrụ na Apple adịghị ka nke ọ bụla ọzọ ị nwetụrụla. Ọ ga-ama gị aka. Ọ ga-akpali gị. Na ị ga-anya isi. N'ihi na ihe ọ bụla ọrụ gị ebe a, ị ga-abụ akụkụ nke ihe dị ukwuu na pụrụ iche.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwere mmasị n'inye ahụmịhe na-eṅomi na ndụ na-eme ka ọ baa ọgaranya, ebe a bụ ebe maka gị.
Ị nwere ike ịdebanye aha ugbu a maka ụfọdụ ọkwa dị iche iche anyị nwere.
Apple na-enye karịa 13 ọnọdụ dị n'ebe dị iche iche gụnyere ọkachamara ọkachamara, ndị isi ụlọ ahịa, ndị ọkachamara, ndị isi njikwa, ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, ndị njikwa, ndị ọkachamara n'etiti ndị ọzọ.
N'agbanyeghị ịbụ a okomoko ika na mba, Apple ka okpukpu abụọ ya ahịa òkè na mba ekele Mepere afọ gara aga nke Ụlọ Ahịa Apple Online. Apple ga-amalite mgbasawanye ya na India na ụlọ ahịa abụọ, otu na Mumbai na nke ọzọ na Delhi, ọ bụ ezie na ugbu a Anyị amaghị ụbọchị Apple ga-eji maka mmeghe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple na-emepe oge ọrụ maka ụlọ ahịa Apple mbụ na India
Enwere ụbọchị mwepụta maka ihe nkiri Apple TV + "The Afterparty"
Ted Lasso's Marketing Mgbasa Ozi ahọpụtara maka ICG Publicist Awards